Sida loo helo kuubannada Aliexpress? Dealseekingsource.com
Arbacada, Oktoobar 27, 2021
bilood ka hor 5
Kuubannada iibiya Aliexpress
Haddii aadan aqoon sida loo helo ama loo isticmaalo kuubannada AliExpress ee huruudda ah, waxaad timid meeshii saxda ahayd, markaad wax ka iibsanayso madal Ali. Waxaa hubaal ah inaad la kulantay suurtogalnimada soo kabashada kuubanka jaalaha ah. Nasiib darro, mar walba ma naqaan sida loo isticmaalo markaan heli karno. Waxaa xusid mudan in kuwani yihiin rasiidhyo aad u xiiso badan oo kuu oggolaanaya inaad qiimo -dhimis weyn ka hesho iibiyaha. Isla mar ahaantaana, xusuusnow inay tahay kuuboon ku habboon dukaanka oo dhan. Kuubanka noocan ah waxaa kaliya loo isticmaali karaa badeecad la siiyay ama koox gaar ah oo badeecado ah. Qeybta xigta ee maqaalka, waxaan ku tilmaami doonaa sida aan u heli karno rasiidhyada huruudda ah, sida ugu habboon ee loo adeegsado, iyo sida aan isugu dari karno rasiidhyada kale si aan u helno sicir -dhimista ugu fiican.
Kuuboonada jaalaha ah ee Aliexpress - habka ugu wanaagsan ee lacag yar lagu bixin karo
Madasha Aliexpress waxay rabtaa inay ku dhiirrigeliso isticmaaleyaasheeda inay wax iibsadaan waxayna bixisaa noocyo kala duwan oo rasiidh ah. Waad ku mahadsan tahay tan waxaan awoodi doonnaa inaan ku iibsanno alaab qiimo -dhimis. Mid ka mid ah tusaalooyinka ayaa noqon kara kuubannada jaalaha ah Aliexpress. Xaaladdan, waxay noqon doontaa kuuboon kuu oggolaanaya inaad yareyso qiimaha iibiyaha gaarka ah. Waxaa xusid mudan in qiima dhimistu inta badan gaarto 30%. Thanks to kaas oo aan ku iibsan karno badeecada la soo xulay qiimo jaban. Si aad uga hesho kaadhadhka jaalaha ah Aliexpress, waa inaan raacnaa websaydhada iibiyeyaasha, halkaas oo aan inta badan ka heli karno fursad aan ku helno kuuban.
Sidee loo hubiyaa tigidhada aan isticmaali karno?
Mararka qaarkood waxaan sidoo kale helnaa qiimo dhimis ka hooseysa qiimaha badeecad gaar ah, markaa waa inaan raadinnaa xiriirada “Hel Kuuboonada”. Kadib markaad gujiso xiriirinta, waxaan heli doonnaa liis ay ku qoran yihiin tigidhada huruudda ah ee Aliexpress. Waxaa xusid mudan inay leeyihiin qiimayaal kala duwan, badiyaa waxay yihiin qiimo dhimis qaddar go'an. Dabcan, waa inaan xusuusannaa in rasiidhada badiyaa waqti-xaddidan yihiin, marka waa inaan isticmaalnaa ka hor taariikhda dhicitaanka. Dabcan, waxaan ku hayn karnaa rasiidhada jaalaha ah Aliexpress si arjiga Ali Express, kiiskan. Waa inaan tagnaa qaybta Farriimaha, waxaan ka heli doonnaa tigidhada iibiyaasha kala duwan halkaas.
Kuubannada iibiyaha ee barnaamijka Aliexpress
Waxaa mudan in la hubiyo farriimaha Aliexpress waqti ka waqti. Waxaan ka heli karnaa rasiidh iibiyayaal kala duwan, waa inaan ogaano in iibiyeyaashu ay bixiyaan qaddar go'an oo ah kuubannada Aliexpress jaalaha ah. Markaa si dhakhso ah ayay u dhammaan karaan. Waa inaan ilaalino bakhaarrada na xiiseeya, markaas farriimo ayaan ka heli doonnaa Xusuusnow - qaar iyaga ka mid ah ayaa laga yaabaa inay ku jiraan rasiidh huruud ah oo aad u soo jiidasho leh Aliexpress. Waa inaan taas xusuusnaa Kuuboonada jaalaha ah ee Aliexpress ha yarayn kharashyada maraakiibta. Waxay kaliya yareeyaan qiimaha alaabta laftooda. Dabcan, si uu kuuboonku u shaqeeyo, waa inaan ku darnaa alaabta dambiisha qiimaha lagu cayimay kuubanka. Waa in aan dambiisha ku buuxinnaa amarka ugu yar.
Hubi haddii iibiyuhu bixiyo tigidhada
Iibiyaha fiiro gaar ah leh waa inuu hubiyaa kahor iibsashada kasta haddii aan ka heli karno tigidhada huruudda ah ee Aliexpress dukaanka la siiyay. Waxaa mudan in lagu hormariyo caadadan oo kale. Waad ku mahadsan tahay taas oo aan awoodi doonno inaan wax badan kaydsano, ka raqiisan ka iibso AliExpress. Dabcan, waa inaan ogaano inay jiraan noocyo kala duwan oo ah furayaasha xayeysiinta, kuwaas oo waliba awoodi doona inay xoogaa hoos u dhigaan qiimayaasha aasaasiga ah ee lagu dabaqi karo. Si aad u hubiso kaadhadhka huruudda ah ee Aliexpress ee aan isticmaali karno, ee nooca desktop -ka:
tag tabka Xisaabta
Xaaladdan, waxaan awoodi doonnaa inaan hubinno rasiidhada aan haysanno. Waxaa xusid mudan in ay jiraan saddex tab halkan, kan koowaad waa Kuuboonada AliExpress, tabka ku xiga waa Kuubannada Iibiye.
Maxaa rasiidhyo ansax ah?
Dabcan, waa inaan tagnaa tabka ansaxa ah si aan u awoodno inaan aragno rasiidhyada hadda jira. Xusuusnow in tigidhada lagu bixiyo dukaamada marar badan, marka waa inaan isla markiiba hubinnaa tigidhada My Coupons. Waxaan inta badan hilmaamnaa qaar ka mid ah Kuuboonada jaalaha ah ee Aliexpress, qaar iyaga ka mid ah ayaa dhacay. Waxaa xusid mudan in kuuboonada dhacay ay lumiyaan midabkooda huruudda ah ayna noqdaan cawl. Sidaa darteed, markaan ka helno tigidhada jaalaha ah Aliexpress, waa inaan hubinnaa markay codsanayaan, iyo goorta aan adeegsan karno.
Waa inaan sidoo kale xusuusnaano in tigidhada huruudda ah ee Aliexpress laga yaabo inay quseyso dhammaan badeecadaha iibiyaha la siiyay ama marka ay tahay shey gaar ah. Markaa waa inaad hubisaa sidaan awood ugu yeelan doonno inaan isticmaalno kuuboon jaalle ah Aliexpress. Dabcan, iibiyeyaashu waxay badanaa siiyaan rasiidh huruud ah alaab soo jiidasho yar oo aan helin iibsadayaal aad u badan. Sidaa darteed, waa inaan hubinnaa sida saxda ah ee loo adeegsado kuubanka jaalaha ah, dabcan, waxaa ugu wanaagsan in la helo rasiidhyo khuseeya dhammaan baaxadda dukaanka la siiyay.
Sidee loo helaa kuuboonada Aliexpress?
Kuuboonada huruudda ah ee iibiyaasha sidoo kale waxaa lagu heli karaa iyadoo la isweydaarsado lacagta birta ah, badiyaa waxaad u baahan tahay, tusaale ahaan, 100 qadaadiic ah si loogu beddelo kuuboon jaalle ah Aliexpress. Dabcan, waxaan ku heli karnaa qadaadiic siyaabo kala duwan, midkood waa Lucky Forest, fikradda ugu fiican ayaa ah in la beero geed, kiiskan waxaan heli karnaa 3, 9 ama 20 qadaadiic. Ciyaartu waa in geed la beero oo la beero ilaa uu ka baxo si aan u awoodno inaan aruurino gunnadayada. Dabcan, waa inaad hubisaa ikhtiyaarka kuugu faa'iidada badan. Dad badan ayaa geed ku doorta 20 qadaadiic oo maalinba mid cusub beerta.
Waa inaan ogaano in dixirigu uu na khatar gelin karo, kiiskan, haddii aanan ka saarin, waxaan heli doonnaa kaliya 18 shilimaad. Waxaan dardargelin karnaa koritaanka geedka annagoo waraabinayna. Xaaladdan oo kale, 5 dhibcood oo biyo ah waa in la ururiyaa saddexdii saacadoodba mar, taas oo loo adeegsan doono dardargelinta koritaanka. Dhibic kastaa waxay kobcin doontaa koritaanka 6 daqiiqo. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale ku guuleysan karnaa qadaadiicda noocyada kala duwan ee ficillada, waxaan mararka qaarkood heli karnaa qadaadiic aan ku daalacanno dalabka dukaan la siiyay. Waad ku mahadsan tahay tan, waxaan awoodi doonnaa inaan aruurino qadaadiic ku filan Aliexpress si loogu beddelo kuubannada Aliexpress jaalaha ah.
Flip 'n' Guul
Mid kale oo aad looga jecel yahay Ali Express waa Flip 'n' Win, kiiskan, waxaan u baahanahay 5 qadaadiic wareeg kasta si aan u ciyaarno. Kadib kaararka ayaa la sawiray, waxaan daaha ka qaadi karnaa laba ka mid ah oo aan ku guuleysan karnaa qadaadiicda dusheeda. Mararka qaarkood waxaa jira sidoo kale noocyo kala duwan oo rasiidh ah oo lagu guuleysto. Tani waa fursad wanaagsan oo lagu buuxin karo qadaadiicdayada. Waxaa xusid mudan in ciyaartu ay tahay mid aan kala sooc lahayn, mararka qaarkood waxaan rabnaa inaan raacno dhaq -dhaqaaqyada goobo -shaqsiyeedka, laakiin xitaa haddii aan maareynno inaan raacno baloog la siiyay. Waxaa jiri kara qiima kale oo hoos yimaada, sidaa darteed waa ciyaar gabi ahaanba aan kala sooc lahayn, ciyaartoy kasta waa inuu doortaa istiraatiijiyaddiisa ciyaarta.
Dabcan, sidoo kale waxaa jira ciyaaro kale, xeelado kale oo gooldhalinta. Laakiin waxaa lagu sharxi doonaa maqaallo gooni ah. Xaqiiqdii, tigidhada huruudda ah ee Aliexpress waa fikrad aad u wanaagsan oo lagu keydiyo iibsashada, taas oo ah sababta macaamiil badani u xiiseynayaan inay raadiyaan oo hubiyaan helitaanka tigidhada iibiyaasha kala duwan. Marka waxaan ku awoodi doonnaa inaan ku iibsano qiimo jaban Ali Express. Dabcan, waa inaan tagnaa tabka ansaxa ah si aan u awoodno inaan aragno rasiidhyada hadda jira. Waxaa mudan in la xusuusto in rasiidhada lagu bixiyo dukaamada marar badan.
Xusuusnow in kuuboonadu dhici karto
Markaa waa inaan eegnaa tigidhada Kuubbadahayga mar, inta badan waxaan illownaa qaar ka mid ah rasiidhada huruudda ah ee Aliexpress, qaar baa dhacay. Waxaa xusid mudan in kuuboonada dhacay ay lumiyaan midabkooda huruudda ah ayna noqdaan cawl. Sidaa darteed, markaan ka helno tigidhada jaalaha ah Aliexpress, waa inaan hubinnaa markay codsanayaan, iyo goorta aan adeegsan karno.
Waa inaan sidoo kale xusuusnaano in tigidhada huruudda ah ee Aliexpress laga yaabo inay quseyso dhammaan badeecadaha iibiyaha la siiyay ama marka ay tahay shey gaar ah. Waa inaad hubisaa sida aan u awoodno inaan u isticmaalno kuubannada jaalaha ah Aliexpress. Dabcan, iibiyeyaashu waxay badanaa siiyaan rasiidh huruud ah alaab soo jiidasho yar oo aan helin iibsadayaal aad u badan. Sidaa darteed, waa inaan hubinnaa sida saxda ah ee loo isticmaalo kuubanka jaalaha ah. Waxaa ugu wanaagsan in la helo rasiidhyo khuseeya dhammaan bakhaarka la siiyay.
Tags: kuuboonada aliexpress, Kuuboon jaale aliexpress, kuuboon jaale ah
sano ka hor 1
Waxyaabaha Muhiimka ah ee laga Fiirsado Kahor Iibsiga Daawashada KoreTrim
Xagee ka iibsan karaa AmazFit Watch jaban?
bilood ka hor 3
Xuquuqda daabacaadda © Dhammaan xuquuqdu way xifdisan | Mowduuca Maskaxda maskaxda